လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းအတွင်းရှိ Kluger နှင့် Surf စလစ... | CarsDB
လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းအတွင်းရှိ Kluger နှင့် Surf စလစ်ကပ်ကားအမျိုးအစားများ နယ်ဘက်မှ ဝယ်ယူမှုရှိလာ
လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း အတွင်းရှိ Kluger နှင့် Surf စလစ်ကပ်2wheel နှင့်4wheel ကားအမျိုးအစားများကို ယခုရက်ပိုင်းမှ စတင်ကာ နယ်ဝယ်လက် အများဆုံး လာရောက်ဝယ်ယူလာကြောင်း လှိုင်ယာဉ် ရောင်းဝယ်ရေးစခန်း အတွင်းရှိ ဝါရင့်ကားဝယ်ရောင်းများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်.။
Kluger စလစ်ကပ်ကားအမျိုးအစားကျတော့2wheel တွေ ရောင်းရတယ်.။ Surf စလစ်ကပ်ကား အမျိုးအစားကျတော့4wheel တွေရောင်းရတယ်.။ ဝယ်တဲ့သူတွေကလည်း နယ်ဘက်တွေက အများဆုံးဖြစ်တယ် ဟု လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းအတွင်းရှိ ဝါရင့်ကားဝယ်ရောင်း ကိုလှထွန်းက ပြောသည်.။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်များတွင် စလစ်ကပ်အမျိုးအစားများဖြစ်သည့် Toyota Alphard, Rav4 Wish စသည့်ကားအမျိုးအစားများ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ရခြင်းသည် ရန်ကုန်ဝယ်လက်များ အဓိကဝယ်ယူ အသုံးပြုကြတာဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုတစ်ပတ်မှတော့ Kluger, Surf စလစ်ကား အမျိုးအစားများသည် နယ်ဝယ်လက်များ ဝယ်ယူအသုံးပြုသူများလာသည့်အတွက် စလစ်ကပ်ကားအုပ်စုတွင် အရောင်းရဆုံး ကားများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်.။
နယ်ဝယ်လက်များ ဝယ်ယူလာကြည်သည့် Kluger, Surf စလစ်ကား ဈေးနှုန်းများမှာ Toyota Kluger မော်ဒယ် 2004,2wheel ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်ပါဝါ ၂၀၁၄ စီစီ၊ Auto ဂီယာ ရောက်ရှိနံပါတ် ရရှိမည်ဆိုပါက လှိုင်ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းတွင် ကျပ်သိန်း ၂၃၀ ဝန်းကျင်ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်သလို Toyota Surf မော်ဒယ် 1997 4wheel ဒီဇယ်အင်ဂျင်ပါဝါ ၃၀၀၀ စီစီ၊ Auto ဂီယာနံပါတ် ထွက်ရှိထားသည့် ကားအမျိုးအစားဆိုလျှင်လည်း ကျပ် ၁၉၅ သိန်းဝန်းကျင်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေး စခန်းများတွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်.။
AutoCar Buyers' Guide
Vol:1 - Issue. 20, March 28, 2015 မှ ကူးယူဖော်ပြသည်.။
လှိုငျယာဉျရောငျးဝယျရေးစခနျး အတှငျးရှိ Kluger နှငျ့ Surf စလဈကပျ2wheel နှငျ့4wheel ကားအမြိုးအစားမြားကို ယခုရကျပိုငျးမှ စတငျကာ နယျဝယျလကျ အမြားဆုံး လာရောကျဝယျယူလာကွောငျး လှိုငျယာဉျ ရောငျးဝယျရေးစခနျး အတှငျးရှိ ဝါရငျ့ကားဝယျရောငျးမြားထံမှ စုံစမျးသိရှိရသညျ.။
Kluger စလဈကပျကားအမြိုးအစားကတြော့2wheel တှေ ရောငျးရတယျ.။ Surf စလဈကပျကား အမြိုးအစားကတြော့4wheel တှရေောငျးရတယျ.။ ဝယျတဲ့သူတှကေလညျး နယျဘကျတှကေ အမြားဆုံးဖွဈတယျ ဟု လှိုငျယာဉျရောငျးဝယျရေးစခနျးအတှငျးရှိ ဝါရငျ့ကားဝယျရောငျး ကိုလှထှနျးက ပွောသညျ.။
ပွီးခဲ့သညျ့ ရကျမြားတှငျ စလဈကပျအမြိုးအစားမြားဖွဈသညျ့ Toyota Alphard, Rav4 Wish စသညျ့ကားအမြိုးအစားမြား အရောငျးအဝယျဖွဈရခွငျးသညျ ရနျကုနျဝယျလကျမြား အဓိကဝယျယူ အသုံးပွုကွတာဖွဈကွောငျးနှငျ့ ယခုတဈပတျမှတော့ Kluger, Surf စလဈကား အမြိုးအစားမြားသညျ နယျဝယျလကျမြား ဝယျယူအသုံးပွုသူမြားလာသညျ့အတှကျ စလဈကပျကားအုပျစုတှငျ အရောငျးရဆုံး ကားမြားဖွဈကွောငျး သိရသညျ.။
နယျဝယျလကျမြား ဝယျယူလာကွညျသညျ့ Kluger, Surf စလဈကား စြေးနှုနျးမြားမှာ Toyota Kluger မျောဒယျ 2004,2wheel ဓာတျဆီ အငျဂငျြပါဝါ ၂ဝ၁၄ စီစီ၊ Auto ဂီယာ ရောကျရှိနံပါတျ ရရှိမညျဆိုပါက လှိုငျယာဉျရောငျးဝယျရေးစခနျးတှငျ ကပျြသိနျး ၂၃ဝ ဝနျးကငျြဖွငျ့ ဝယျယူရရှိနိုငျသလို Toyota Surf မျောဒယျ 1997 4wheel ဒီဇယျအငျဂငျြပါဝါ ၃ဝဝဝ စီစီ၊ Auto ဂီယာနံပါတျ ထှကျရှိထားသညျ့ ကားအမြိုးအစားဆိုလြှငျလညျး ကပျြ ၁၉၅ သိနျးဝနျးကငျြဖွငျ့ ရနျကုနျမွို့တှငျးရှိ ယာဉျရောငျးဝယျရေး စခနျးမြားတှငျ အရောငျးအဝယျဖွဈလကျြရှိကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ.။
Vol:1 - Issue. 20, March 28, 2015 မှ ကူးယူဖျောပွသညျ.။
Posted at: 26-03-2015 14:24 PM